Wasiirka Amniga gudaha iyo mas’uuliyiin kale oo booqday Hotel Maka Al-mukarama”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Amniga gudaha ee xukuunadda Soomaaliya iyo taliyaha hay’adda Nabadsugidda Qaranka iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa maanta howlo kormeer ah ku tegay hotelka Maka Al-mukarama ee Muqdisho oo Jimcihii ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, halkaasi oo ay warbixinno ku aadan sida uu ku dhacay weerarka iyo sida ay u soo afmeereen ciidamada amniga kaga dhageysteen saraakiisha hay’adaha amniga.
Sidoo kale xubno ka socday ururrada bulshada rayidka ayaa gaaray Hoteelka, waxaana ay si wada jir ah uga warbixiyeen Wasiirka iyo xubnihii kale dhibaatada ka dhacday hotelka, sida looga hortagi karo iyo waxa ay ka qabto diinta Islaamka in dad shacab ah la gumaado.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka sheekeeyay waxa ay ka qabto diinta Islaamka in la dhibaateeyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan, isagoo ugu baaqay dhallinyarada ay marin habaabhiyeen kooxda Al-shabaab in ay ilaah ugu towba keenaan dambiga ay ka galayaan shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah.
“Ficilkan ay sameynayaan shareecada ilaahay in uusan boos ku laheyn,sida aan isu gubaysaan ayaa aakhirina Naarta la idin ku shubi waayo waxaa dilaysaa waa dad Muslimiin ah Soomaaliya goormeey gaalowday?” ayuu yiri Sheekh Nuur.
Canab Xasan Cilmi Guddoomiye ku-xigeenka Ururka Haweenka Qaranka ayaa ku baaqday in si wada jir ah loola dagaallamo argagixisada Al-Shabaab.
“Waa Hoteelkii labaad ee sanadkan gudahiisa la galo ee lagu laayay shacab iyo mas’uuliyiin Soomaaliyeed,waa Hoteel Shaamow xanuunkii ka dhacay xanuun lamid ah,waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in meel kasta oo ay joogaan nabad sugid iyo Boliis aad noqotaan” ayay sheegtay Canab.
Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay ka go’antahay sidi loo soo afjari lahaa dhibaatada ay shacabka ku hayaan maleeshiyaadka Al-shabaab, isagoo intaa ku daray in Wasaaraddu ay gacan ka geysan doonto sidii milkiilayaasha hoteleeda looga caawin lahaa sugidda ammaanka.
“Dadka la marin habaabiyay oo caqli yar uu ku dambeeyo in ay iska soo noqdaan iskana daayaan waxyaabaha ay gacanta kula jiraan anagana waan soo dhaweynaynaa waayo waa dadkeenii la marin habaabiyay” waxaa sidaa yiri Wasiirka Amniga gudaha.
Mudane C/rasaaq Cumar Maxamed Wasiirka Amniga gudaha ayaa amaanay laamaha amniga ee dalka dadaalada lagu xaqiijinaayo amaanka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.
Sawir Qaade:Sugaal Macalim